Akhriso:-Xukunka Toogashadda ee Soomaaliya oo Hoos u Dhacay Sanadkaan 2019 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Akhriso:-Xukunka Toogashadda ee Soomaaliya oo Hoos u Dhacay Sanadkaan 2019
Hey’adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa warbixin ay dhawaan soo saartay waxa ay ku sheegtay in 31% uu hoos dhacay fulinta xukunada dilalka toogashada ah ee waddamada caalamka, marka laga reebo Shiinaha.
Marka xisaabta laga reebo dalka Shiinaha, qiyaasta tirada dadka xukunada dilka ah lagu fuliyey sanadkii hore ee 2018 ayaa gaareyso 690 qof, waxa ayna tiradaas si weyn uga yartahay xakunadii dilka ahaa ee sanadkii 2017 oo lagu fuliyey 993 qof.
Shiinaha waa dalka ugu badan ee sida deg-dega loo fuliyo xukunada dilalka ah, waxaana lagu qiyaasaa in sanadkii kumanaan qof la toogto, balse dowladda Shiinaha waligeed si rasmi uma aysan soo bandhigin xogta rasmiga ah ee la xiriirta dilalka toogashada ah.
Marka laga soo tago shiinaha, dalalka ugu badan ee ay ka dhacaan fulinta xukunadaas dilalka toogashada ah ayaa waxa ay kala yihiin Iran, Saudi Arabia, Vietnam, iyo Iraq, Afartan waddan ayaa la sheegay in ay ka dhaceen 78% xukunadii dilalka ee ahaa ee la fuliyey sanadkii tagay.
Waddamada kale ee loo aqoonsanaa in ay aad u fara badan yihiin dilalka toogashada ah ee ka dhaca sida Iraq, Pakistan, iyo Somalia ayey warbixintu sheegtay in sanadkii tagay ee 2018 uu hoos u dhac ku yimid fulinta xukunada dilka ah ee dalalkaas.
Qaaradda Africa gaar ahaan dalalka saxaraha ka hooseeyo sida Botswana, Somalia iyo South Sudan ayaa sidoo kale uu hoos u dhac ku yimid dilalka toogashada ah ee lagu fuliyo dadka ay maxkamaduhu ku rideen xukunka.
Dalka Somalia oo ay weeraro fara badan ka fuliyaan dagaalyahannada Al Shabaab ayaa waxaa ka dhaca xukunno badan oo lagu rido shaqsiyaad ka tirsan Al Shabaab oo lala xiiirinayo ku luglahaanshiyaha weeraradaas oo ay ka dhashaan dhisho fara badan, Xukunnada ayaa isugu jira dil toogasho ah iyo xabsi mudda dheer ah waxaana xukunadaasi rida maxkamadda Ciidamada qalabka sida ee Somalia.
Tirada dadkii lagu fuliyey xukunka toogashada ah ee Somalia sanadkii 2017 ayaa gaaraya 28 qof halka sanadkii 2018 xukunka lagu fuliyey 24 qof oo ay maxkamaddu xakunta, waana tiro ka yar sanadkii 2017.
Toogashadii ugu dambeysay ee Somalia ayaa dhacday 14-October sanadkii 2018, waxaana lagu fuliyey shaqsi ku eedeesnaa ku lug lahaanshiyaha weerarkii xasuuqa ahaa ee 14-kiii October 2017 ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho.
Sanadkaan hadda aynu ku jirno ee 2019 oo seddex meelood hal meel ay baxday ayuusan jirin xukun dil ah oo ay maxkamada ciidamada qalabka sida ee Muqdisho ay fulisay iyadoo ay jiraan dad badan oo xukunno dil ah hore loogu riday.